Otu esi etinye Sysdig na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Otu esi etinye Sysdig na Ubuntu 20.04
August 1, 2021 by Jọshụa James
Ịwụnye ihe achọrọ
Wụnye Sysdig na Ubuntu 20.04
Iji Sysdig na Ubuntu 20.04
Sysdig bụ isi mmalite mepere emepe, nyocha ọkwa sistemụ: steeti sistemụ ijide yana ọrụ sitere na ịgba ọsọ dabere na Linux usoro dị ka Ubuntu 20.04, wee chekwaa, nzacha, na nyochaa nke bara uru karịsịa maka nyocha usoro, nleba anya na nbipu, n'etiti ihe ndị ọzọ. Sysdig nwere ike ịde ederede na Lua ma gụnye interface-ahịrị iwu yana UI mmekọrịta siri ike na-eji iwu ahụ csysdig nke na-agba ọsọ na ọdụ gị.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye Sysdig na Ubuntu 20.04 na 21.04.
OS akwadoro: Ubuntu 20.04 - nhọrọ (Ubuntu 21.04 na Linux Mint 20)
Ngwungwu achọrọ: curl, gnupg na ngwa-ngwa-ngwa-nkịtị
Mbụ, tupu ihe ọ bụla, melite gị Ubuntu Sistemụ arụmọrụ iji hụ na ngwugwu niile dị adị adịla ugbu a:
Dịka akụkụ nke ihe ndị a chọrọ, ị ga-achọ iji iwu njedebe na-esonụ iji wụnye ngwugwu achọrọ:
sudo apt install curl gnupg software-properties-common -y
Rịba ama, nke a adịghị mma ịwụpụ ma ọ bụrụ na ị jide n'aka na ị nwere ihe ndị a ma bụrụ ihe ọhụrụ.
Iji wụnye Sysdig on Ubuntu 20.04 abụghị usoro siri ike. Ihe mbụ ị ga-eme bụ iji curl iwu ka ibudata wee mebie faịlụ bash. A na-eme nke a site na iji iwu njedebe a:
Usoro n'ozuzu ekwesịghị iwe ogologo oge karịa nkeji ole na ole.
Ozugbo arụnyere, kwado ụdị ma wuo nke Sysdig site na iji ihe ndia:
Ị ga - enweta mmepụta ndị a:
sysdig version 0.27.1
Ugbu a ị wụnyela Sysdig, ị nwere ike ugbu a na-eji nlekota oru software nke a ga-mere na csysdig iwu. Okwu ndetu, ịkwesịrị ịgba ọsọ sysdig as mgbọrọgwụ n'ihi na ọ na-achọ ohere ịnweta mpaghara dị oke egwu dịka / proc usoro faịlụ, /dev/sysdig* ngwaọrụ, na kwesịrị iji akpaaka-buo ya sysdig-nyocha modul kernel.
Nke mbụ, were iwu na-esonụ bulite ihe ngosi:
Ị ga-ahụ ihuenyo n'okpuru:
Mara, ọ bụrụ na ị nwere nsogbu imeghe Sysdig, lelee nchọpụta nsogbu na ala nke nkuzi.
N'ikpeazụ, ị nwere ike pịa bọtịnụ F2 bọtịnụ ịgbanwe echiche azụ maka nrụtụ aka n'ọdịnihu. Ọmụmaatụ n'okpuru:
Na nlele menu n'elu, ị nwere ike iji nke gị igodo igodo ịgagharị gburugburu ka ịhọrọ nhọrọ ị ga-achọ inyocha. Dịka ọmụmaatụ, ịchọrọ ịhụ ya CPU na-arụ ọrụ, wee pịgharịa gaa na ala wee kụọ ya Tinye igodo nke ga-egosipụta ihe ndị a:
Ka ịlaghachi na nhọrọ menu gara aga jiri nke a F2 bọtịnụ igodo. Site ebe a ị nwere ike họrọ nnọọ nnukwu ndepụta. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike iji iwu ahịrị ọnụ. Egosiri ụfọdụ ọmụmaatụ iwu ndị a n'okpuru:
Gbaa iwu a ka ịhụ ya n'elu usoro họọrọ site CPU itinye n'ọrụ pasenti:
Gbaa iwu a ka ịhụ ya njikọ netwọkụ nke sistemu:
Iji lee ndepụta nke usoro usoro:
Ọ bụrụ na ị zutere nsogbu a mgbe ị na-agbalị iji csysdig maka oge mbụ na (Oghere mmeghe mperi: xterm-256color). Enwere ike idozi nke a ọtụtụ oge site na ịwụnye ngwugwu ndị a:
sudo apt install ncurses-term
Mara, naanị tinye (mgbagwoju anya-okwu) ọ bụrụ na ị na-ahụ njehie ozi.
Ị mụtala otu esi etinye ya Sysdig on Ubuntu 20.04 ma ọ bụ 21.04 na ịmụta isi ịnyagharị na ọnụ iwu na nkuzi na nkuzi. N'ozuzu, Sysdig na-ejikọta ọrụ nke ọtụtụ ngwa ahịrị iwu dị ugbu a wee jikọta ha n'otu ngwa yana ezigbo GUI ma ọ bụ iji iwu njedebe ọdịnala iji nyochaa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ ọ bụla nke gị. Linux usoro.
Categories Ubuntu Tags Sysdig, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Otu esi etinye MariaDB 10.6 na Rocky Linux 8
Otu esi etinye ngwa webụ Damn adịghị ike na Rocky Linux 8